2020 & စီးပွားရေးနှင့်အခွန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့မိုင်အကွာအဝေးကိုခြေရာခံ Log App ကို
IOS ကို / Apple အတွက် Download
အန်းဒရွိုက် / Google အတွက် Download
ရိုးရှင်းတဲ့။ စင်ကြယ်သော။ လှသောအဆင်း။ လွယ်ကူသော။
2 အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလ်အပလီကေးပလက်တီနမ်ဆုကို x ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို EasyBiz မိုင်အကွာအဝေးရှိအခြားမိုင်အကွာအဝေး apps များဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားတဲ့စေသည်တစ်ခုပျော်စရာ, လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့မိုင်အကွာအဝေးမှတ်တမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်ရိုးရှင်း, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထိရောက်မှုပေါင်းစပ်။
EasyBiz မိုင်အကွာအဝေး Tracker IOS ကို Apple က & အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်း App ကို
iOS ကို free download
အဘယ်ကြောင့် EasyBiz မိုင်အကွာအဝေး Tracker 2019 ၏အကောင်းဆုံးမိုင်အကွာအဝေး App ကိုလဲ?
ဂရပ်ဖစ်ကသင်၏ဓာတ်ငွေ့အံဝင်ခွင်ကျ, ငွေကြေးပြန်လည်ပေးချေ, မိုင်အကွာအဝေးများနှင့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်။
EasyBiz User Interface အဘို့အ2အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း App ကိုဆုပေးပွဲ၏ပလက်တီနမ်ဆုရှင်ခဲ့
မိုဃ်းတိမ်ကို Backup ကို
ကျနော်တို့ရုံ $ 2.99 / လအခမဲ့လက်စွဲစာအုပ်ရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Firebase မိုဃ်းတိမ်ကိုဒေတာဘေ့စဒေတာသိုလှောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဆက်ကပ်။
MSN ကိုငွေ, ရိုက်တာသတင်းဌာန, Yahoo ကဘဏ္ဍာရေး, iMore, CNET သတင်းဌာန & ပိုအတွက် Featured!
ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်အစဉ်မပြတ် app ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါကဤနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါလမ်းမကြီးတွင်သင်က Get ရန်လုပ်
+ Adjustments ခြေရာကောက် (လိုအပ်တဲ့အခါ GPS စနစ်တိကျပြတ်သားမှုထိန်းညှိခြင်းအားဖြင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဘက်ထရီ) GPS ။
+ Pre-သတ်မှတ်မည်ဒေတာများကို Functions များ + Start ကို / Stop ခြေရာကောက်လုပ်ဆောင်မှု
+ Metric System ကိုအသုံးပြုပုံများ
+ နျ Standard မိုင်အကွာအဝေးနှုန်း (စီးပွားရေး, Moving, ဒါန, etc ။ ) / အခွန်ထုတ်ယူခြေရာကောက်
+ graph & Analytics မှ - စုစုပေါင်းမိုင်အကွာအဝေး, ဓါတ်ငွေ့စားသုံးမှု, မိုင်အကွာအဝေး Returns, & စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်များ
+ အခမဲ့လက်စွဲစာအုပ် Backup တွေကိုနှင့် Google Firebase cloud storage options များ။
ပလက်တီနမ် BMA ဆုပေးပွဲ
"ကျွန်မရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျင့်ကိုကျင့်နေ့စဉ်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်မိုင်အကွာအဝေးခြေရာခံစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app မိုင်အကွာအဝေး, လမ်းကြောင်းများနှင့်မိုင်အကွာအဝေးဖြတ်တောက်အပါအဝင်ငါ့အလိုရှိသမျှနယ်လှည့်ဒေတာစောင့်ရှောက်။ လစဉ်ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ODO GPS စနစ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူဂရပ်များနားလည်သဘောပေါက်အချိန်အများကြီးကယ်တင်ပေါင်း ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုလုပ်နေတာထက်အများကြီးပိုတိကျမှန်ကန်ရလဒ်များကိုပေးသည်။ "
- က Google ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Play
ယခုအခမဲ့ app ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
Easybiz မိုဘိုင်း app ခြေရာခံတစ်ဦးလုံးဝအခမဲ့မိုင်အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ပြုလုပ် Download နှင့်ချွေတာရေးကိုစတင်ပါ။
©ကာဇီ Schmidt က 2019 - EasyBiz Applications ကို IOS ကို & အန်းဒရွိုက်